Ny alakamisy 25 jolay teo, vehivavy roa mpanondrana olona ho any Arabia Saodita no voasambotry ny polisin’ny SCES na service central des enquêtes spécialisées. Teny Andraisoro no tafiditra tao anatin’ny vela-pandrika ireto mpanao trafika ireto. Olona tsara sitrapo no namatsy vaovao ny mpitandro filaminana fa nahitana vehivavy roa manangona olona alefa any ivelany eny amin’iny faritra Andraisoro iny. Nanokatra ny fanadihadiana ny polisy ka voamarina teny an-toerana izany.
Tamin’ny 5 ora maraina ny ekipan’ny polisin’ny SCES no nidina teny an-toerana io alakamisy io nisava trano ka tra-tehaka tamin’ny sarika am-pandriana ny vehivavy dimy. Ny iray tamin’ireo no fantatra, araka ny fanadihadiana fa mpikarakara ny taratasy handehanana any am-pitandranomasina. Avy any amin’ny faritra Sambava sy Vohémar ary Andapa no fiavian’ireto vehivavy ireto ary efa herinandro no nahatongavany teto an-drenivohitra. Vehivavy iray mpifanolo-bodirindrina amin’izy ireo ihany koa no nosamborina noho ny firaisana tsikombakomba tamin’io raharaha io. Mbola misy namany hafa karohina hatrany raha ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.